Xiddiga weerarka Man United Odion Ighalo ayaa ku dhow in uu …
Ramzi Yare	 May 13, 2020
Isku daygii Man United ay ku doonesay inay si joogto ah ula wareegaan Odion Ighalo ayaa ku dhow in uu bur buro. Kooxda leh milkiiliyada xiddigan ee Shanghai Shenhua ayaa dalbatay in xiddiga heerka caalami ee dalka Nigeria in dib loogu soo…
Goolhayihii hore ee xulka Qaran oo lagu dilay degmada Afgooye
Ramzi Yare	 May 8, 2020
Goolhayihii hore ee xulka Soomaaliga Cabdi Weli Colaad Qanyare oo ku magacdheeraa Gaatamow ayaa la dilay isagoo ku jira masaajid ku yaala magaalada Afgooye. Kooxo bastoolado ku hubeysan ayaa la sheegay inay toogteen Gaatamow isagoo…
Kubbaddiisa iyadoo aysan Suullin ayuu naga tagay Xiddigii dhexe ee ugu fiicnaa mudaddii burburka
Ramzi Yare	 May 4, 2020
Yuusuf Cali Nuur oo aad u taqaanaan (Yuu-Cali), waa midka la rummeysan yahay inuu yahay khadkii dhexe ee ugu fiicnaa mudaddii burburka. Waqtiga ugu wanaagsan xirfaddiisa aan weli guurin waxa uu ku soo qaatay Elman FC iyo xulka qaranka…
Macalinkii hore ee Nigeria Sunday Oliseh ayaa ku booriyey Odion Ighalo…
Ramzi Yare	 Apr 9, 2020
Tababarihii hore ee Nigeria Sunday Oliseh ayaa ku booriyey Odion Ighalo inuu sii joogo Manchester United wixii ka dambeeya xilli ciyaareedkaan. Manchester United waa mid ka mid ah naadiyada ugu waa weyn adduunka Ighalo waa inuu sameeyaa…
Halyeygii Hore ee Kubadda Cagta Soomaaliyeed Ee Cabdiqaadir Biriq U Geeriyooday Caabuqa Coronavirus…
Caasimada London ee dalka UK, waxa ku geeriyooday halyeygii kubadda cagta Soomaaliyeed ee Cabdiqaadir Maxamed Faarax Biriq oo ka mid ahaa ciyaartoygii ugu fiicnayd kubadda cagta Soomaaliya ee usoo ciyaaray xulka qaranka. Cabdiqaadir Biriq…
Hordhaca: Raadsan vs Rajo-Kulan ka tirsan horyaalka Somali Premier League oo galabta lagu cayaari…
Ramzi Yare	 Mar 11, 2020
Kooxaha Raadsan iyo Rajo ayaa galabta ku ballansan garoonka Eng Yariisow Stadium, ciyaar qeyb ka ah horyaalka Somali Premier League. Kulankan ayaa ah mid aad u xiiso badan labadan kooxood ayaa diyaar garow xooggan u galaynciyaartan weyn,…
Ciyaaryahan Axmed Xasan Macaani oo ka hadlay ku biiristiisa Kooxda Horseed
Ramzi Yare	 Mar 8, 2020
Kooxda kubadda cagta Horseed ayaa sanadkan sameysay saxiixyo waa weyn, waxaana ka mid ah Cabdikariin Qubaaye iyo Axmed Xasan Macaani kuwaaso oo heshiisyo u saxiixay kooxdan. Wiilasha Horseed ayaa iminka kala sarreynta horyaalka ku jira…
Badrudiin Mohamed	 Mar 7, 2020
Kooxda kubadda cagta Horseed ayaa la soo wareegtay xiddigaha kala ah; Axmed Xasan Macaani iyo Cabdikariin Qubaaye, kuwaas oo ka mid ah xiddigaha ugu wanaagsan ee ka dheela khadka dhexe. Labadan xiddigan ayaa horey waxay ugu soo ciyaareen…
Hordhaca:Elman iyo Heegan-Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka horyaalka Somali Premier League
Ramzi Yare	 Mar 4, 2020
Kooxaha Elman Sports Club iyo Heegan Sports Club ayaa galabta ku balansan garoonka Eng Yariisow Stadium ee dhaca degmada Cabdicasiis ee Gobolka Banadir. Garoonka Eng Yariisow ayaa galabta marti soori doona kulanka ugu xiisaha badan kaas oo…